E6013 ịgbado ọkụ ntụ ntụ maka ịme ịgbado ọkụ electrode, nke bụ ụdị carbon nchara electrode na ígwè ntụ ntụ titania ụdị mkpuchi. AC / DC. Ịgbado ọkụ ọnọdụ niile. Ọ nwere arụmọrụ dị mma nke ịgbado ọkụ ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na-efesa. Ọ nwere mfe re-mgbanye, ezi slag detachability, ezigbo ịgbado ọkụ anya. Klas nkịtị na akara na-enweghị isi ka ịhọrọ.
1.Quick iku & Easy restrike & Easy slag-iwepụ
2.Stable arc arụmọrụ & ntakiri aak nnyonye anya
3.Smooth na-egbu maramara anya & Magburu onwe ya n'ibu Njirimara
4. Ọdịmma dị elu na ụkpụrụ nrụpụta dị elu na -30c.
5. Ọnụego nkwụnye ego dị elu
6. Ezigbo mgbape mgbape na arụmọrụ x-ray
7. Mbukota: 300kgs mgbochi mmiri akpa; ma ọ bụ dị ka ị chọrọ
1.Electrode ga-akwado 350-380 ℃ maka 1 awa tupu ịgbado ọkụ, kpoo electrode mgbe ị na-eji ya.
3.Ikwesiri iji nkenke arc di nkenke, ntughari kwesiri ka o buru oke ibu, uzo uzo di warara kwesiri.
Ihe TiO2 AL2O3 SiO2 Mn CaO + MgO Organic Ndị ọzọ
Nsonaazụ n'ezie 42 4.5 28 9 10.5 4 2
Gbado ọkụ electorde ntụ ntụ nke E7018, E6011, E6010, E7024, wdg dịkwa. Pls kpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ.
Usoro teknụzụ chọrọ:
Ekwesịrị ịkọwa akụkụ dị mkpa maka ịgbado ọkụ dịka ụkpụrụ dị mkpa mgbe ị na-akwadebe usoro ịgbado ọkụ.
Na-ezukọta ihe ebu (ihe ndozi mgbakọ) nke akụkụ ndị a na-agbanye ọkụ, a ghaghị ịtụle ọnụọgụ ịgbado ọkụ. Ekwesiri ime ka o doo anya na ndidi nke akụkụ welded di n'ime ihe a choro.
Tupu ịgbakọta, wepụ nchara nchara, mmanụ, uzuzu na mmiri n'ime ihe na-erughị 25mm n'akụkụ abụọ nke weld. Maka welds dị mkpa nke obere nhazi alloy, a ga-ewepụ oxide.
Ekwesịrị ịchịkwa ọdịiche nke mgbakọ ahụ n'oge mgbakọ. Oghere nke welt welds bụ 2 ~ 3mm, na ọdịiche nke fillet welds bụ 0 ~ 2mm. Mgbe ọdịiche dị n'ógbè ahụ buru oke ibu, gbalịa belata ya na nha akọwapụtara. A machibidoro iwu ịgbakwunye ihe nzacha na ọdịiche ahụ, a machibidoro njikọta siri ike iji belata nrụgide fọdụrụnụ na ngwongwo ndị a na-agbanye.
Ihe ịgbado ọkụ na nhazi usoro eji arụ ọrụ ịgbado ọkụ ga-abụ otu ihe ahụ ị chọrọ.
Eldgbado ọkụ arụmọrụ nwere ike na-rụrụ mgbe ịgbado ọkụ akụkụ gafere nzukọ nnyocha.
Maka ihe ọhụrụ na usoro ọhụụ, a ga-emerịrị nyocha usoro ma enwere ike iji ha rụọ ọrụ naanị mgbe ha tozuru.
A ga-ewepụ slag na ntụpọ na mgbọrọgwụ nke weld tupu ịgbado ọkụ na weld nke weld na ndị ọzọ welds
Eldgbado ọkụ naanị nwere ike ịrụ mgbe nhicha.
Tupu ịgbado ọkụ, amachibidoro ịmalite mgbanye arc ma nwalee ngbanwe ugbu a na mpaghara na-adịghị ịgbado ọkụ. Mgbe ịgbado ọkụ, a ga-ehicha elu nke weld ahụ ma kpoo ya.
Net, maka akụkụ ịgbado ọkụ dị mkpa nke akụkụ ịgbado ọkụ dị mkpa, akara welder kwesịrị ka akara ya n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị mgbe ịgbado ọkụ.
Maka efere ígwè nke ọkpụrụkpụ nke 0.3 ~ 4mm, a na-ejikarị ụzọ ịgbado ọkụ dị ka mgbatị achara gas gas ma ọ bụ welding argon tungsten arc.
Maka ịgbado ọkụ nke ngwongwo nchara, electrodes, wires na fluxes nke otu ike ọkwa kwesịrị ịhọrọ.
Mgbe ịgbado ọkụ na-arụ ọrụ dị ala, ọ dịghị mma ka ị kwụsị n'etiti, ma gbalịa ịmechaa ịgbado ọkụ n'otu oge; n'oge ịgbado ọkụ n'ọtụtụ oyi, nkwonkwo dị n'agbata ọkwa kwesịrị ịdị na ọnọdụ okpomọkụ n'etiti ọkwa kwesịrị ịchịkwa n'etiti 250 ~ 300 ℃. Tupu ịgbado ọkụ na-esote akwa nke ịgbado ọkụ, ọ kwesịrị kpochara. Lelee weld nke akwa oyi akwa iji hụ na enweghị ntụpọ.
Nke gara aga: Igwu Mgbado ọkụ D608
Osote: Nwayọọ Steel ịgbado ọkụ Electrode AWS E6010
Igwe anaghị agba nchara ịgbado ọkụ Electrode AWS E309L-16 ...